OGAALKA SOOMAALI-WEYN Qaybtii 7aad.W/Q.C/naasir Guray Meecaad. |
OGAALKA SOOMAALI-WEYN Qaybtii 7aad.W/Q.C/naasir Guray Meecaad.
Dareen xooggan ayaa ka dhashey falkii han-jebiska ahaa iyo su’aalihii xujada ahaa ee Soomaalida uga imanayay maamulkii Talyaaniga ee la wareegey talada degaanka Ceel-Buur. Waxay ahayd xilli uusan Talyaanigu si fiican u caga-dhigan gobollada dhexe ee Soomaaliya. Dareenkii ka dhashay hanjabaaddiisa waxay keentey jawaab fal-celis ah, taas oo maamulkii Talyaaniga uga timid dhanka kooxdii Fallaago. Xabsigii loo taxaabay saddexda nin (Goda-gode, Guushaa iyo Garoon), waxaa si gaar ah uga xumaadey dadkii degaanka ku dhaqnaa, gaar ahaan raggii ay saaxiibada ahaayeen. Cumar Samantar oo isagu ahaa odeyga Fallaago, isla-markaasna ahaa nin uu Cap. Franco Carlo u aqoonsadey in uu odey ka yahay degaanka, qudhiisu aad ayuu uga xumaadey arintaas. Raggii loo yiqiin Fallaago waxay markaas bilaabeen abaabul ka dhan ah Talyaaniga. Waxaa u muuqatey, xabsiga la dhigey saddexdan nin oo muqaddimiinta ka ahaa ciidamadii saldanadda, xushmadda ay ka heli waayeen maamulkan cusub, in uusan jireynin qof Soomaali ah oo xushmad ka helaya. Isla-markaas waxay sheeko ku hayeen hooggii iyo bi’ii uu Talyaanigu gaadhsiiyay Soomaalida ku dhaqan gobolka Banaadir. Sidaa darteed waxay qorsheysteen in ay iska celiyaan oo ay la diriraan.
Talyaaniga waxaa markaas degaanka u joogey ciidan xooggan oo ku dhow 400 oo nin. Waxay wateen qoryo qaarkood boobayaal ah oo haddii Soomaalida lagula diriro ay baaba’ayaan. Xaqiiqadu waxay ahayd, Soomaalidu in ayan laheyn awood ay isaga caabiyaan xoogga Talyaaniga. Laakiin ooraah baa jirta odhaneysa (Dagaalku waa Dhagar). Nin-kasta oo xoog wayn, xilliba allaha ka-dhigee, waxaa lagu legdi karaa niyad adag oo loo hayo qadiyadda dagaalka loo gelayo, urursanaanta dadkeeda iyo qorshaha haboon oo hoggaanku qaato. Halkii ayaa kooxdii Fallaago, iyaga oo ku hubeysan tilmaamahaas aan soo sheegney, waxay ku guddoonsadeen in ay qalcadda weeraraan.
Waxaa xusid mudan, dhismaha qalcaddu in ay ahayd mid horey u jirtey oo waxaa degganaan jiray ciidamadii suldaanka. Xerada waxaa ku sugnaa ciidankii Talyaaniga u adeegayay iyo hubkoodii. Waxaa kale oo halkaas yiil bakhaaradii rasaasta iyo bakhaar ay dhigeen hub ay ka urursheen dadkii degaanka ku dhaqnaa. Sarkaalkii ciidanka u sareeyey Cap. Franco Carole, qudhiisu xerada gudaheeda ayuu degganaa. Waxaa kale oo xerada ku dhex-yiil xabsiga ay ku xidhnaayeen saaxiibadooda saddexda ah. Raggii Fallaago ahaa xerada horey ayay u yiqiineen. Waxaa ka maqnaa oo keliya qaabka uu Talyaanigu u dejiyay ciidamadiisa. Taasna si wanaagsan ayay u sahan-sadeen. Markay xogtii u dhamaatey, fulintii qorshaha weerarka ayay ku dhaqaaqeen.
Labo qeybood oo ay isu qeybiyeen ayaa qeyb waajibkoodu ahaa in ay gudaha xerada ka dagaalamaan. Qeybtaas oo 15 nin ahaa ayaa waxaa hoggaaminayay Cumar Samantar. Iyagu waxay qaateen waajib ah, intuusan dagaalku bilaaban in ay dilaan Cap. Franco Carole, inay la wareegaan bakhaarada hubku yaal iyo in ay la wareegaan qoryaha halista ah. Qoryahaasi waa kuwa rasaastoodu u dhacdo sida daran-dooriga ah. Kooxda kale oo iyagu ahaa ciidan siddeetameeye lagu qiyaasey, dibadda ayay diyaar ku ahaayeen. Waajibkoodu wuxuu ahaa , markii ay xabbaddu ka bilaabato xerada gudaheeda, in ay afarta jaho ka soo weeraraan xerada. Dilka Cap. Franco ayaa waxay ka dhigteen ishaarada hore ee kooxda gudaha gashay ay ku bilaabayaan dagaalka. Kooxaha dibadda jooga, qorshuhu wuxuu ahaa iyaguna in weerarkooda ay bilaabaan markii gudaha ay ka yeedho dananka dhawaaqa hore.
Dharbaaxadii Cumar Samantar uu u geystey saaxiibkiis, iyo amarkii uu ku bixiyay in la ganaaxo oo la xidho, waxay ku abuurtey sarkaalkii dhallinyarada ahaa kalsooni ka xijaabta weerarka ay kooxdan u socdaan. Cumar Samantar iyo labadii nin oo kale waxaa loo sii daayay in ay u gudbaan Cap. Franco Carole (Doldolool). Raggii kale oo 12-ka xerada ayay uga soo horeeyeen. Sida qorshohoodu ahaa nin waliba meeshii uu ka howl-geli lahaa ayuu ku dhowaadey. Qoryaha boobayaasha ah ee xerada yiil waxay ahaayeen laba qori, kuwaas oo sancadoodu ahayd FIAT, noocooduna ahaa 19:2. Qoryahan ayaa xilligaas waxay kamid ahaayeen hubka ugu culus oo ay siteen xoogagga gumeysiga. Marka laga reebo Daraawiishtii oo dhowr jeer dagaal ka heley qoryo ceynkan oo kale ah, Soomaalida weli gacantooda ma soo gelin qoryaha daran-dooriga u dhaca. Aqoonna xataa uama ayan lahay. Kooxdii kacdoonka ee Fallaago, waxaa ka go’naa in labadaas qori ay gacanta ku dhigaan. Sidaa darteed waxay isu qeybiyeen saddex afaraad oo kamid ah raggii xerada galey.
Cumar Samantar, Xaaji Yuusuf Maxamad iyo Cabdulle Cirraabe ayay ahaayeen saddexda nin ee gudaha u galay qolkii Cap. Franco Carole. Iyagu waxay qooraha ku soo xidheen madiil (bir yar oo ay meyraxda ku soofeystaan). Siddeed nin waxay kala aadeen labadii qori. Afarta nin ee kale waxaa la siiyay waajib ah in ay laayaan ilaalada albaabka way nee xerada. Waxaa la wariyay, subaxaas la ballamay ayaa Xaaji Yuusuf oo u socda ballantii, wuxuu la kulmey nin kooxda kamid ahaa oo la yidhaahdo Shiikh Xasan Cabdi-shakuur, isaga oo geed hoostiis ku weeseysanaya. Xaaji Yuusuf ayaa wuxuu yidhi:Shiikh Xasanow maxaad heysaa ?. Wuxuu ugu jawaabey: Sunnadii salaadda duxa ayaan u weeseysanayaa ?. Markaas ayuu Xaaji Yuusuf wuxuu yidhi: Shiikh Xasanow, waajib ayaa taagane, sunnada ka imow. Markaas ayaa Shiikh Xasan weesadii ka kacay goobtii lagu ballamay aadey. Isagu lug ayuu kaga dhaawacmay dagaalkaas, taas oo uu la dhutin jiray intii uu noolaa. (Waxaanu ka soo xiganaey Siciid Cismaan Keenadiid. 10/ 4- 2010. Boosaaso – Soomaaliya).
“ Cap. Franco Carole, saddexdii nin oo is daba-jooga ayaa qolkiisii soo galay. Isagu markiiba waa uu shareystey indhahooda. Iyaga oo aanan wada-hadlin ayuu dhankii ay bastooladda u tiil u deg-degey. Iyagu markaas weli kama ayan soo dhamaan jaran-jartii. Inteeyan gacantiisa gaadhin bastooladdii, ayaa Cumar Samantar ku soo deg-degey oo ku boodey. Cumar waa laga fara-baxsadey kaddib makii la legdey. Xaaji Yuusuf ayaa xigey oo isna ka daba-yimid oo ay is qabsadeen. Cap. Franco wuxuu ahaa nin xooggan oo tababaran. Sidaa darteed Xaaji Yuusuf qudhiisu si fudud ayuu u legdey. Cabdulle Cirraabe oo isagu ahaa nin ka xoog waynaa saaxiibadiis ayay jaran-jartii ka soo dhamaadey oo ay gacantiisii soo gaadhey sarkaalkii. Cabdulle Ciraabe, isaga ayaa Faranko legdey. Dabadeed Cumar iyo Xaajigii oo mid walba uu madiilkiisii diyaarsadey ayaa meelo halis ah kala dhacay. Sidaas ayaa Cap. Faranco Carole uu ku dhintey. Dabadeed meydkiisii ayay daaqadda ka soo tureen. “. (Waxaanu ka soo xiganaey Siciid Cismaan Keenadiid. 10/ 4- 2010. Boosaaso – Soomaaliya).
“ Dagaal muddo saacado ah socdey dabadeed waxaa libtii ay raacdey Cumar Samantar iyo raggiisii. Ciidankii gumeysiga ee laga qabsadey qalcaddii. Intii ka hartey, iyaga oo fara-maran waxaa lagu ugaarsadey baadiyaha degaanka. Hubkii xerada laga heley waxaa kamid ahaa 334 qori, kuwaas oo dad-waynihii ku dhaqnaa degaanka looga soo ururshey hub-dhig iyo 2 qori oo boobayaal ah nooca 19:2, kuwaas oo sancadoodu tahay FIAT iyo 100.000 oo rasaas ah“. (Taariikhda Soomaaliya, Maxamad Ibraahim Maxamad, 2000, s. 93, Muqdishow – Soomaaliya)
Heshiiskaas si buuxa u fulay bilowgii sanadkii 1925-kii, ayaa wuxuu saldhig u noqdey xuduudda marta dhulkii la odhan jiray Jubba oo badankiisu ay Soomaalidu ku dhaqan yihiin. Waa dhulka u dhexeeya labada webi ee ah Jubba iyo Taana. Xuduudda dhankeeda galbeed (NFD), waxaa la haray gumeysigii Ingiriiska ahaa. Talyaaniga waxaa uu qaatay dhanka bari ee xuduudda. Wuxuu markaas heley dhul qiyaastiisu le’eg tahay 90.000 km2. Sababta ay u siiyeen waxay ahayd, ballan hore ayaa jirtay oo ahayd haddii uu dagaalka la galo (waa dagaal-waynihii I-aad), in dhulkaas la siinayo dhulka baaxaddaas leh. Xilligaas wixii ka horeeyey Talyaanigu sahan keliya ayuu ku marayay. (Italian Colonialism in Somalia. Robert Hess. Chicago University. 1966. P. 156. Chicago – USA).
Talyaaniga, marka uu ku sikanayay gobollada koonfureed ee gudaha ah, waxaa gar-wadeenno u ahaa ganacsato carab ah oo degaanka gudaha ah ku dhaqnaa. Iyagu waxay xoog u degganaayeen Luuq iyo Baardheere oo ahaa xarumo ganacsi. Isla-markaas waxay ku lahaayeen beero waawayn. Raggaas ganacsatada ah waxay xidhiidhinayeen ganacsiga gudaha ah iyo midka degmooyinka Jubba iyo Banaadir ee xeebaha ku yaal.
Haddii nadaamkii gumeysiga ahaa uu si fudud ugu sikadey gobolladan koonfureed, dhanka gobollada dhexe waxaa qorshihiisii hakad ku keeney kacdoonkii ay hor-kacayeen kooxdii Fallaago. Lama-filaan ayay ku noqotey dhacdadii lagula wareegey Ceel-Buur. Talyaaniga waxaa u muuqatey khatarta uu ku sugan yahay mashruuciisii gumeysi-doonka ahaa ee uu la damacsanaa Soomaalida iyo degaankooda, gaar ahaan gobollada Dhexe. Si deg-deg ah ayuu ciidan u soo abaabuley, si uu mar-kale gacanta ugu dhigi Ceel-Buur. Ujeeddadiisu waxay ahayd in uu ka hor-tago in Fallaago ay caga-dhigtaan degaanka. Sidaa darteed, markay taariikhdu ahayd 15/ 11- 1925-kii, ayuu weerar soo qaadey uu ku doonayay in uu degmada ku soo ceshado, raggiisiina u aaro. Ciidamadii Fallaago, waxay u fadhiisteen meel degmada ka xigta dhanka koonfur. Ciidankii la soo direy, iyaga oo aanan fileyn ayaa waxaa heley weerar dhuumaaleysi ah. Halkii ayaa lagu baabi’iyay ciidankii Talyaaniga. Wixii ay wateen oo qalab ahaan waa lagala wareegey. (Abdisalam M. Salwe. The Collapse of the Somali State: The Impact of the Colonial Legacy. 1996. London – UK).
Ragga ay la kulmeen waxaa kamid ahaa ugaaska Xawaadle (Ugaas Rooble). Sida laga wariyey awoowayaal xilligaas noolaa, ugaasku si wanaagsan ayuu u soo dhoweeyey. Ballanna waa ay kala qaateen. Inteeyan socdaalkii dhameysan ayaa waxaa ka war-heley Talyaanigii oo dhankiisa kaga jiray abaabul colaadeed. Nasiib-darro qorshahoodii waa uu dhicisoobey, kaddib markii raggii sagaalka ahaa lagu diley shirqool loo dhigey. Iyaga oo ku sii jeeda Ugaaska Ceyr (Ugaas Diini Beereed), kob dhexe iyagoo maraya ayaa waxay ku hoydeen duddo ugaaska la qabiilo ah. Halkii ayaa sida caadada Soomaalidu ahayd lagu marti-geliyay. Raashinkii loo keeney ayaa dushiisa lagu laayay. Sheekada waayeel ka-weriska ah ee dhacdadan la xidhiidha waxay sheegeysaa in Geelle Garoon iyo labadii wiil ee fardaha u ilaalinayay ay ka baxsadeen shir-qoolkaas.
Labadii cad oo hilbaha ahaa ayaa la siiyay, si uusan qorshaha shirqoolka ah u khaldamin. Geelle markuu wiilashii gaarey, wuxuu ku amrey in ay fardaha deg-deg ku fuulaan oo ay baxsadaan. Raggii siddeedda ahaa ee hadhay, mindiyihii ayaa lagu bilaabey. Nin keliya ayaa la daayay oo wuxuu ahaa Goda-gode. Isagu wuxuu xidid la ahaa Ugaas Diini Beereed oo ahaa Ugaaska qabiilada raga dilka geeysanaya ay ka soo jeedaan. Goda-gode waxaa u dhaxdey gabar la yidhaahdo Xareeda Diini Beereed. Isga geed ayaa lagu xidhey, dabadeed dood ayaa laga qaatey sidii laga yeeli lahaa. Inkasta oo raggiisii ay ka reebeen oo aan waabkii lagu dilin, misana qudhiisu ma uusan raagin oo geedkii uu ku xidhnaa ayaa lagu diley isaga oo xidh-dhiran. Ninka diley waxaa magaciisa la odhan jiray Madar Dhala-dheere. (Waxaan ka soo xiganey Cabdi-Nuur Axmad Faarax Bootaan.17/ 7- 2011. Laicester – UK).
Xigasho/Dr Saadiq Eenow